Manao fanentanana ny governemanta ao Angôla mba hampiatoana ny fampiasana sterôida hanovàna ny vatana · Global Voices teny Malagasy
Manaitra momba ny loza ateraky ny "jarda" ireo mpanentana
Voadika ny 29 Jolay 2021 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, русский, Português
Noho ny fitomboan'ny fahafatesana sy fahasarotana ateraky ny fampiasàna fanafody sy fandidiana hanatsaràna endrika, izay manova ny firafitry ny vatana, nanapaka hevitra ny governemanta ao Angôla ny hanao fanentanana hitaizana ny olona sy hanairana ny vahoaka. Sary: Giovana Fleck/Global Voices
Mpandihy sy mpihira i Julieta Gomes Manuel taloha, fantatra ihany koa amin'ny hoe Juelma Paraíso. Noho ny fahasarotana nateraky ny fandidiana ho fanovàna endrika, antsoina hoe “jarda” dia maty izy tamin'ny May 2021 tao amin'ny toerampitsaboana iray ao Loandà.
Ny Jarda dia fomba iray ampidirana biopolymers sy sterôida voatrolombelona ho ao anaty vatana mba hanalehibeazana faritra iray manokana. Mora kokoa ireny fomba ireny raha mitaha amin'ny atolotr'ireo toerampitsaboana klinika, ary araka izany dia malaza kokoa. Fa mety koa hampididoza bebe kokoa izy ireny.
Nanoloana ny fahafatesan'i Manuel, nandefa fanentanana iray ny governemanta ao Angôla mba hiadiana amin'ilay fomba. Ny Ministeran'ny Tanora sy Fanatanjahantena no nikarakara azy, ilay fanentanana amin'ny alàlana kaonferansa sy dokambarotra fanentanana dia natao hanairana ny fahatsiarovantenan'ny olona momba ny fampiasàna ny sterôida voatrolombelona sy ny zavadoza mety haterany.
Patrícia Pires, Angôley mpihira izay nandalo fandidiana roa tamin'ny 2020 mba hanesorana ny jarda tao amin'ny vatany, taorian'ireo fihasarotana nateraky ny dingana voalohany, no ho Masoivoho amin'ilay ady.
Fantatra amin'ny maha “Masoivohon'ny Tolona Jarda ao Angôla” azy, tonga nitsidika an'ilay kudurista Flor de Raíz i Patricia Pires, taorian'ny nandalovany fandidiana fanesorana jarda, hanome fanohanana azy sy handrisika ireo vehivavy hafa izay mampiasa singa tahàka io mba hitsahatra tsy hanao izany.
Ahoana no nahalasa azy ho fomba fanao tao Angôla
Tamin'ny 2018 no nanomboka nalaza ny Jarda. Asehon'ireo saripika sy lahatsary ety anaty tambajotra sôsialy ireo vehivavy milalao ireo faritra amin'ny vatany amin'ny fampiasàna io fomba io. Azo vidiana mora foana ny sterôida anabôlika, na eny amin'ny tsena tsy ara-dalàna izany, na eny amin'ny fivarotam-panafody.
Kanefa, lasa nanjary naha-be resaka ilay fomba fanao rehefa nivoaka an-gazety ny tatitra momba ny raharahan'ireo vehivavy nanenina noho ny nanaovany jarda. Noho ny endrika tsy voafehy ananan'ilay fomba fanao, ny maha-tsizarizary ny fitaovana ampiasaina, ary mazàna ny tontolo tsy ara-pahasalamana anaovana azy, mety hitondra mankany amin'ny fahazoana areti-mifindra mahery vaika sy fahasarotana hafa ny jarda.
Tamin'ny 2019, Jornal de Angola nitatitra fa vehivavy roa no maty tao Loandà, renivohitr'i Angôla, raha telo hafa kosa no simba tanteraka ny endriny, taorian'ny nanandraman-dry zareo nanova ny ampahany tamin'ny vatany, toy ny vody, valahana ary tongotra, tamin'ny fampiasana akora simika mba hanalehibeazana kokoa azy ireny tamin'ny alàlan'ny fomba tsy azo antoka, roa taona lasa izay. Notaterina ihany koa tao amin'ny TPA, ilay fahitalavitra lehibe indrindra ao amin'ny firenena ilay tranga, araka ny aseho amin'ny lahatsary eto ambany:
Tamin'io taona io ihany, notaterin'ny gazety fa, taorian'ny nampiasàny jarda, ilay kudurista Samara Panamera, iray amin'ireo mpanakanto be mpahalàla mpiangaly kuduro (dihy mahazatra ao Angôla), dia tsy maintsy niatrika fandidiana tany amin'ny vodiny. Tsinian'ireo mpanakiana ho ny fenitra ara-hatsarantarehy manimba sy ny fanindriana tafahoatra ny resaka endrika ivelany ao Angôla no mahatonga ny firohotana hanao jarda. Renato Palma, dokotera iray nitafàn'ny Jornal de Angola, nilaza mihitsy fa:
Ny vokatry ny hadisoana amin'ny fampiasàna akora anabôlika, ao anatin'ny fotoana fohy, dia maharikoriko ary matetika no tsy azo iverenana intsony (…). Miova toerana ny ravim-bodin'ireo olona mampiasa fahatany ny sterôida anabôlika noho ny vesatr'izy ireny. Rehefa tsy mahatahiry intsony ny firirotra natoraly nananany ny hoditry ny olombelona, dia mila miatrika fandidiana ilay olona mba hanisahana na hanesorana izany mihitsy aza.
Afaka miparitaka anaty lalandrà tonga mivangongo hatrany amin'ny voa, hiteraka aretin'ny voa, fahasemporana ary aretin'ny fo ilay tsiranoka. Amin'ny tranga sasany, ampiarahana amin'ny fitsaboana ampiasàna antibiôtika, fitsaboana sy endrika maro isankarazany, mety azo atao ny mampitsahatra ilay dingana, saingy tsy ho toy ny taloha intsony ilay olona.
Fanehoankevitra momba ilay fanentanana
Ilay drafitra, natolotry ny minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahatena, Ana Paula do Sacramento Neto, dia ho ampiharina manerana ny firenena, ary nomena ny anarana hoe ”Ho an'ny Fahasalamana sy ny Aina, Lavo ny Jarda”:
Tanaty fandraisana andraikitra iray avy amin'ny fikambanana Juventude Organizada Responsável e Organizada (JIRO) – Tanora Voarindra sy Tomponandraikitra – ny tanjona, ankoatra ireo tanjona hafa, dia ny hampihena ny tahan'ny fampiasàna sterôida, indrindra fa any amin'ireo toerana fanaovana fanatanjahantena ofisialy sy tsy ara-dalàna ao amin'ny firenena, ary hamohazana ny sain'ny tanora momba ny loza mety haterany.
Na izany aza, misy ireo nilaza fa tsy io fomba fanao io no tokony hampiasa saina ny governemanta ao Angôla io fa izay hanatsaràna ny fiainan'ny tanora angôley:
Mba hisorohana ireny henatra vitsivitsy ireny, ny fanatsaràna ireo karazam-panatanjahantena aty Angôla no tokony hifantohan'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, saingy noho i Angôla tsy firenena fa sarimiaina, dia ny fiarahana miasa amin'ny Combate a Jarda aty Angôla no ifantohan-dry zareo. #ZavatraTsyMitondraInona
Ny hafa milaza fa mariky ny fiovàna ny jarda, satria tany am-piandohany dia fomba fanao nampitsiriritra izy io, saingy amin'izao androntsika izao dia ny fanakianana sisa no tavela:
Mahaliana ny mahita ny fiovan-javatra. Ny ankamaroan'ireo vehivavy nohindrahindraina noho ny endrika ivelany tao anaty andiany iray dia nampiasa “jarda” daholo, ankehitriny dia kianina izy ireny. Tsy mitsara ny “ratsy/tsara” aho eto, fa ny zavamisy dia : miova ny zavatra rehetra 🙂